Siyaasadda baajinta (adeegyada) | Waraaqaha
Siyaasadda baajinta (adeegyada)
Cawaaqibta joojinta: Haddii ay dhacdo kala noqosho wax ku ool ah, adeegyadii la wada helay waa in la soo celiyaa oo wixii faa iidooyin ah (tusaale ahaan dulsaarkii) la dhiibaa. Haddii aadan awoodin ama qayb ahaan awoodin inaad soo celiso ama dhiibto adeegga la helay iyo dheefaha (tusaale ahaan faa'iidooyinka isticmaalka) ama keliya xaalad sii xumaanaysa, waa inaad noo magdhawdaa qiimaha. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa inaad buuxiso waajibaadka qandaraas bixinta ee muddada illaa lagala noqoshada. Kaliya waa inaad magdhow ka bixisaa xumaanta sheyga iyo isticmaal kasta oo la sameeyo haddii adeegsiga ama sii xumaanta ay sabab u tahay la tacaalida sheyga oo ka baxsan baaritaanka guryaha iyo shaqadooda. “Hubinta guryaha iyo shaqadooda” macnaheedu waa tijaabinta iyo tijaabinta badeecadaha kala duwan, sida ugu macquulsan uguna dhaqan dukaanka. Waxyaabaha la qaadi karo waa in lagu soo celiyaa halistayada. Waa inaad qaaddaa kharashyada caadiga ah ee soo celinta alaabta haddii alaabta la keenay ay u dhigantaa alaabtii la dalbaday iyo haddii qiimaha alaabada la celinayo aysan ka badnayn qaddar dhan 40 euro ama haddii aadan weli helin tixgelinta ama Bixisay heshiiska qandaraaska lagu heshiiyey qayb ahaan. Haddii kale, soo-celinta ayaa kuu bilaash ah. Shayga aan loo soo diri karin baakadda ayaa lagaa qaadi doonaa. Waajibaadka dib u bixinta lacagaha waa in lagu buuxiyo 30 maalmood gudahood. Muddada adiga ayey kugu bilaabaneysaa markii aad noo soo dirto cadeyntaada joojinta ama alaabada, annaga oo leh risiidhkooda.
Xusuusin gaar ah: Xaqa aad u leedahay ka noqoshada wuxuu dhacayaa waqti hore haddii qandaraaska ay si buuxda u wada dhammaystireen labada dhinacba markii aad codsatay ka hor intaadan ku dhaqmin xaqaaga ka noqoshada.
Dhammaadka siyaasadda joojinta
Fadlan sidoo kale ogow: Xuquuqda la noqoshada ma khuseyso qandaraasyada iibka masaafada ee keenista alaabada lagu sameeyay faahfaahintaada ama kuwa si cad ugu habboon baahiyahaaga shaqsiyeed ama kuwa aan ku habboonayn soo noqoshada dabeecaddooda awgeed ama si dhaqso leh u kharibi kara ama taariikhda uu dhacayo ay dhaaftay. Intaas waxaa sii dheer, ma jiraan qandaraasyo masaafad ah oo loogu talagalay gudbinta duubista maqalka ama muuqaalka, qoraallada ama softiweerka, haddii aad furaysid kuwa xambaarsan macluumaadka, ee loogu talagalay gudbinta wargeysyada, joornaalada iyo joornaalada, illaa aad ka dhigeyso caddeynta qandaraaskaaga taleefan. Intaas waxaa sii dheer, xuquuqda dib u noqoshada ma khuseyso qandaraasyada iibka masaafada ee lagu soo gabagabeynayo qaabka xaraashka (156 BGB) ama bixinta adeegyada ku saleysan isgaarsiinta ee lagu bixiyo codsadaha macaamilka si toos ah taleefan ama fakis hal mar, haddii adeegyada maaliyadeed ay ku lug leeyihiin.
Xuquuqda dib ula noqoshada ma khusayso alaabada dhijitaalka ah ee la soo helay loona soo gudbiyay habka soo dejinta, 312 d para. 4 No. 1 BGB.
Codsiga celinta ee badeecadaha aan rarka la soo rari karin waa in qoraal ahaan naloogu soo gudbiyaa, iyadoo lagu caddaynayo alaabta la dalbaday, nambarka qaansheegadka iyo cinwaankaaga. Culayska caddaynta ee dalab celinta ayaa kugu saaran adiga macaamil ahaan.
Fadlan xusuusnow inaad ku darto lambarka qaansheegta, cinwaankaaga oo buuxa iyo faahfaahinta bangigaaga si aad dib ugu soo celiso kharashyadaada soo noqoshada.